I-Online Harms Paper White - I-Foundation Foundation
Ikhaya Ibhulogi yezindaba I-Online Harms Paper White
I-Online Harms Paper White
Azikho izimanga kodwa kusenzima !! Ihlombe elikhulu
I-UK Government ilinde isikhathi eside Iphepha Elimhlophe Ngezikhwama ze-Inthanethi ekugcineni kuvele ngo-8th April 2019. Uma ufuna ukubuka konke okusheshayo (ish), ukukhululwa kwe-press kubeka iHhovisi lasekhaya lapha.
Uma ungathanda ukusabela okuvela kumuntu oyiqonda kahle le nkambu, nakhu okuthunyelwe kwebhulogi lezivakashi. UJohn Carr, isazi esihamba phambili, uyabhala…
Samukelwe ngemfudumalo yizinhlangano zezingane, zabazali nezinye izinhlangano zomphakathi. Lokho kungenxa yokuthi kungumbhalo wezinga lokuqala, okhombisa ukuqala kwendlela entsha yokuphathwa kwe-inthanethi e-UK. Kodwa-ke, wonke umuntu uyazi ukuthi kwenzekani lapha kunesimo sanamuhla cishe kuyo yonke intando yeningi yenkululeko emhlabeni. Kunesizathu salokho.
Nazi izinhloko zami:
Izinkampani ezikhona "Endaweni" yizo lezo "Vumela abasebenzisi ukuthi babelane noma bathole okuqukethwe okukhiqizwa ngumsebenzisi noma bahlanganyele omunye nomunye ku-intanethi." Ngicabanga ukuthi enye enye indlela yokusho "Ezokuxhumana nabantu". Kodwa kungenzeka ukuthi ikwazi ukuhamba ngokubanzi kunezinkampani ngokuvamile ezicatshangwa njengezingosi zokuxhumana nabantu kanye nezinsizakalo.
Umsebenzi osemthethweni wokunakekelwa
Umgogodla wePhepha eliMhlophe yinhloso emenyezelwe yokusungula umsebenzi omusha wokunakekelwa osemthethweni ukwenza izinkampani zithathe umthwalo ophakeme ngokuphepha kwabasebenzisi bazo futhi zibhekane nokulimala okubangelwa okuqukethwe noma umsebenzi ezinsizakalweni zazo.
Ukuthobela ukuphoqelelwa ngumlawuli ozimele
Kuzosungulwa umlawuli omusha, osemthethweni. Kumakhodi wokusebenza kuzobeka okulindeleke ezinkampanini ezifanelekayo. Uma izinkampani zifuna ukufeza umsebenzi oshiwo ngendlela engabekwanga kukhodi, kuzofanele zichaze futhi zithethelele kumlawuli ukuthi indlela yazo ehlukile izoletha kanjani ngempumelelo lelo zinga elifanayo noma elikhulu lomthelela.
Imibandela nemibandela yenkampani ithola ukubaluleka okusha
Imibandela nemibandela yokusebenza kwebhizinisi kuzofanele icace futhi ifinyeleleke, kufaka phakathi izingane nabanye abasebenzisi abasesichengeni. Lokhu sekuvele kuyisidingo se-GDPR esingahle sipelwe ngokuphelele kukhodi yokusebenza ekuklanyweni okufanelekile kobudala okuzoshicilelwa ngumzimba wobumfihlo wase-UK (i-ICO) kungekudala (?).
Ngokuvamile, umlawuli omusha uzohlola ukuthi imigomo nemibandela yenkampani iyaphoqelelwa kanjani. Ukukwazisa imibiko yayo nokuqondisa isenzo sayo sokulawula, umlawuli uzoba namandla okudinga imibiko yaminyaka yonke evela ezinkampanini.
Kunengqondo futhi kufanayo
Umlawuli uzocabangela amandla ezinkampani ukuhlangabezana nezimfuneko zokulawula, kufaka hlangana nokufinyelela kwamapulatifomu abo ngokuphathelene nesisekelo somsebenzisi kanye nobukhulu bezingozi.
Le ndlela ehambisanayo izobe isetshenziswe emthethweni ozocaca ukuthi izinkampani zikhona okudingekayo ukuthatha isinyathelo esilungile nesilinganiselwe sokubhekana nokulimaza emisebenzini yabo (ukugcizelela kwami).
Umlawuli uzobeka okulindelwe okucacile ukuthi yiziphi izinkampani okufanele zenze ukubhekana nomsebenzi ongekho emthethweni nokugcina izingane ziphephile ku-intanethi.
Ayikho inhloso yokushiya isimiso se-platform immunity kodwa
"Uhlaka olusha lokulawula (luzothatha) indlela enhle kakhulu (ngokukhulisa) umthwalo wemisebenzi ukuthi iphathelene nokulimala kwe-intanethi"
Ngilindele ukuthi lokhu kuzoholela ezingeni eliphakeme lokuthunyelwa kwe-PhotoDNA kanye nemigomo ye-algorithms engabona i-paedophilic nezinye izinto ezilimazayo ezifana nokuxhashazwa.
Hhayi ngaphambi kwesikhathi.
Ukuqamba igama, ukuhlambalaza nokubala
Umlawuli uzoba namandla amakhulu okudinga izinkampani ukuba zihlinzeke ngolwazi. Ukuphawula kuzoba ingxenye ebalulekile yohulumeni omusha. Izinkampani ezingasetshenzisiwe zizobonakala esidlangalaleni.
Izinhlawulo, ukuvimbela kanye nomthwalo wemfanelo wobugebengu
Umlawuli uzoba namathuluzi amaningi okusekela nokusekela inqubomgomo kuhlanganise nekhono lokukhokhisa imali eningi, okungenzeka ngisho nokufuna ukuthi amasayithi noma amasevisi avinjelwe. Ukwenza abaphathi abaphezulu ababenecala lokuhluleka nakho kumakhadi.
Okumhlophe okuthwetshwe ngokuhlaza
Kuthiwa iPhepha Elimhlophe linamathiselwe kakhulu ngohlaza. Lokhu kusho ukuthi kunemininingwane eminingi ebaluleke kakhulu okufanele yenziwe. Okubili okubaluleke kakhulu ubunikazi namandla omphathi nokuthi uxhaswa kanjani.
Kunenkathi yokubonisana ehlelekile kwezinyanga ezintathu kodwa akungabazeki ukuthi lezi zindaba zizosikhathalela kakhulu kunalokho. Umthetho uzodingeka. Hlukana, lokho akuvamile into engashesha.
Olunye uvivinyo olunesibindi kodwa lunokusekelwa okubanzi
Vele kuzoba nezimpikiswano ngemininingwane ebalulekile. Kodwa-ke, wonke amaqembu amakhulu ezepolitiki ahambelana kabanzi maqondana namaphuzu abalulekile ku-White Paper. Lokho kungenxa yokuthi umbono womphakathi ngokuqinile uxhasa lezi zinhlobo zezinyathelo. Kuzoba nezazi zemibono ezisacabanga ukuthi oHulumeni namaPhalamende kufanele baziqhelelanise nezindaba zalolu hlobo. Kodwa-ke lapho noma uMark Zuckerberg efuna umthethonqubo osemthethweni ngiyangabaza ukuthi labo bantu abeqisayo bazothola ukudonsa kanzima.
Iminyango ye-Last Chance Saloon iboshwe futhi ibhalwe uphawu.
Le bhulogi ithunyelwe ekuqaleni April 8, 2019 by UJohn Carr. Uma ungathanda ukubona amanye amabhulogi esiwabambe kuJohane, nangu.
Abantu abadala kuphela: empini yokugcina izithombe zobulili ezingcolile ezise-intanethi ezivela ezinganeni zaseBrithani